Ko Nge's Page - MyanmarITPro - A Social Network for Myanmar IT Professionals
MaleSingapore Share on Facebook
Blog Posts (9)Discussions (18)EventsGroups Ko Nge's Likes Ko Nge's Friends
View All Ko Nge's Discussions
FOX Moives တွေကို မိမိရဲ့ဖုန်းတွေကနေကြည့်မယ်....
Fibre internet mio TV လိုင်းယူထားသူတွေ မိမိရဲ့ phone တွေနှင့် FOX Movice လေးတွေနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံးပွဲစဉ်လေးတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်...နောက်ပြီး phone တွေနှင့် Removal control လဲလုပ်လို့ရပါသေးတယ်...Singtel ဆိုရင် mio TV နှင့် Starhub TV လိုင်းယူထားသူတွေ FOX Moive ကို မိမိရဲ့ဖုန်းiphone နှင့် Samsungတွေကနေလဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်...itune နှင့် Android Applicaation တွေမှာ FOX Movice App ကို download လုပ်လို့ရပါတယ်.....Starhub လိုင်းဆိုရင် Starhub anywhereနှင့် Starhub…ContinueTags: နည်းပညာ Started this discussion. Last reply by JonKawshin Aug 11. Install OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ..
MAC OS X 10.9.2 ကို USB Drive တွေမှ install OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ.. Before you get started, you will need to gather together the following:A USB drive of 8GB or more, orA USB external hard drive, orA Firewire external hard drive, orA Thunderbolt external hard drive, orAn SD card of 8GB or moreA Mac running OS X 10.7 Lion or laterConfidence in using Terminal, orA copy of …ContinueTags: နည်းပညာ Started May 21 စကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!
Credit @ thanhan ပညာရှင်အဆင့် IT Engineer ဆိုတာ Technician and Professional အဆင့်ဆိုပြီးရှိပါတယ်၊ စစချင်းတော့ အလုပ်သင်လူငယ်လေးတွေကို Technician အဆင့်လောက်ဘဲပေးလေ့ရှိပြီး လစာကို ဒေါ်လာ၁၂၀၀ကနေ ၁၈၀၀လောက်ဘဲစပါတယ်၊ နောက် အဆင့် က အဖော်မပါ တယောက်ထဲ ချဲရတဲ့ Professional ကို ဒေါ်လာ၁၆၀၀ကနေ ၂၅၀၀ အများဆုံးပေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒီမှာလုပ်သက်ရှိရင်တော့ ပိုရပါလိမ့်မယ် ဒေါ်လာ၃၀၀၀ ပတ်လည်ပေါ့…. ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ကျော် သမားတွေလဲရှိပါတယ်… ဒီလိုတွေက…ContinueTags: နည်းပညာ, ပညာရေး Started Oct 15, 2013 မိမိရဲ့gmail မေးအကောင့်ကို Hackerလေးတွေ ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါသတဲ့ဗျာ!
Credit@Ko Nge မိမိနာမည်နဲနဲထွက်လာတာနှင့် မိမိအီးမေးတွေကိုဖောက်ခိုးဖို့ကြိုးစားလာတော့တာဘဲ..MAC က Vurus မရှိသလောက်ပြောကျလို့လေ..အခုတော့ များလိုက်တဲ့ ဟာတွေ…. မိမိမြန်မာဘလော့တွေကြောင့်လားမသိပါဘူး ခိုးတဲ့နိုင်ငံက အမေရိကန်ကနေလာတာတဲ့ဗျာ... ရွှေhacker လေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ….အခုလဲ အီးမေးတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ် sys.bat2.txt(Bat.delfiles-6) နှင့် xxxx.emlx files 57ခုကို email တွေထဲပို့လွှတ်တာဗျာ…ကျွှန်တော်အီးမေးကိုAuto ဖွင့်ထားမိတာကိုး.. 7120.emlx files…ContinueTags: Technology Started Sep 17, 2013 နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)
Credit@ Ko Ngeအမိမြန်မာပြည်ကရွှေလေးတွေ တောက်လျှောက်မေးလေ့ရှိတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ အလုပ်ရတတ်ကျသလဲ? ဘာတွေပြင်ဆင်လာရမလဲ?အမှန်နိုင်ငံခြားမှက ကိုယ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာတွေနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘဲဝင် လုပ်လေ့ ရှိတာကိုး၊ အလုပ်ခန့်တာလဲ ရခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးခန့်ကျတာပါ၊ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည် ကတော့တမျိုးပါ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုး B.Sc ဘွဲ့တွေက ဘာနေရမှလုပ်စားလို့မရပါဘူး! သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့…ContinueTags: အလုပ်အကိုင် Started Apr 11, 2013 နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)
Credit@ Ko Ngeအမိမြန်မာပြည်ကရွှေလေးတွေ တောက်လျှောက်မေးလေ့ရှိတတ်တဲ့ နိုင်ငံခြားမှာဘယ်လိုအလုပ်မျိုးတွေ အလုပ်ရတတ်ကျသလဲ? ဘာတွေပြင်ဆင်လာရမလဲ?အမှန်နိုင်ငံခြားမှက ကိုယ်ကျောင်းပြီးထားတဲ့ ဘွဲ့၊ဒီပလိုမာတွေနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဘဲဝင် လုပ်လေ့ ရှိတာကိုး၊ အလုပ်ခန့်တာလဲ ရခဲ့တဲ့လက်မှတ်ကိုကြည့်ပြီးခန့်ကျတာပါ၊ ဒါကြောင့် အမိမြန်မာပြည် ကတော့တမျိုးပါ အသက်မွှေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်တဲ့ ရိုးရိုး B.Sc ဘွဲ့တွေက ဘာနေရမှလုပ်စားလို့မရပါဘူး! သူတို့နှင့် သက်ဆိုင်တဲ့…ContinueTags: အလုပ်အကိုင် Started Apr 11, 2013 မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!
မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!We make tools Your make do!Credit@ Ko Ngeဒါလဲဘလော့ဂျာတွေမှာ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ! ဒါလဲနာမည်ရလာတဲ့ ဘလော့တွေမှာ စာဖတ်ပရတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားပြီး စာဝင်ရေးချင်တာတွေရှိကျမှာပါနော်! ဒီအတွက် ၀င်ပြီးပညာပေးတွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဖလှယ်ချင်ကျတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ Group အုပ်စုတွေက.....အခု နောက်ပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ Social…ContinueTags: နည်းပညာ Started Feb 28, 2013 ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!
ချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!We make tools Your make do!အွန်လိုင်းပေါ်မှာဝင်ငွေရှာနည်းလေးများ အပိုင်း(၈)Credit@ Ko Ngeချစ်သူရည်းစားလေးရှာရင်း ၀င်ငွေရအောင်လုပ်နည်းလေးပါ!ဘုရားဖူးရင်းလိပ်ဥပါတူးလို့ရတဲ့နည်းတွေပါ....တခြားပေါက်ကရာမတွေးပါနှင့်သာမန်အွန်လိုင်းတွေမှာလို ရိုးသားစွာ သင်ငွေရှာတဲ့နည်းလေးတွေပါ၊ သူကထူးခြားတာက ၀ါဿနာရင် သင်တို့လဲဝင်ရှာလို့ရတာပါ၊အမိမြန်မာပြည်မှာတော့ အခုလို…ContinueTags: စီးပွားရေး၊ငွေကြေး၊နည်းပညာ Started Feb 16, 2013 View All
Ko Nge has not received any gifts yet
Ko Nge's Page
Ko Nge posted blog postsစင်ကာင်္ပူပိုးထနေတဲ့ ရွှေမြန်မာအုပ်စုလေးတွေ အခန်းတွေစုဌားပြီး အလုပ်လာရှာနေကျတယ်!အင်တာနက်သုံးရင်း ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရှာမလဲ?Aug 11JonKawshin replied to Ko Nge's discussion FOX Moives တွေကို မိမိရဲ့ဖုန်းတွေကနေကြည့်မယ်...."https://www.facebook.com/groups/ciscomyanmar/ မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးနိုင်ပါပြီခင်ဗျာ"Aug 11Ko Nge postedadiscussionFOX Moives တွေကို မိမိရဲ့ဖုန်းတွေကနေကြည့်မယ်....Fibre internet mio TV လိုင်းယူထားသူတွေ မိမိရဲ့ phone တွေနှင့် FOX Movice လေးတွေနှင့် ကမ္ဘာ့ဖလားဘော်လုံးပွဲစဉ်လေးတွေကိုကြည့်လို့ရပါတယ်...နောက်ပြီး phone တွေနှင့် Removal control လဲလုပ်လို့ရပါသေးတယ်...Singtel ဆိုရင် mio TV နှင့် Starhub TV လိုင်းယူထားသူတွေ FOX Moive ကို မိမိရဲ့ဖုန်းiphone နှင့် Samsungတွေကနေလဲ ကြည့်လို့ရပါတယ်...itune နှင့် Android Applicaation တွေမှာ FOX Movice App ကို download လုပ်လို့ရပါတယ်.....Starhub လိုင်းဆိုရင် Starhub anywhereနှင့် Starhub…See MoreJun61
Ko Nge updated their profileMay 21Ko Nge shared their discussion on FacebookInstall OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ..May 21Ko Nge shared their discussion on FacebookInstall OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ..May 21Ko Nge postedadiscussionInstall OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ..MAC OS X 10.9.2 ကို USB Drive တွေမှ install OS X Mavericks ontoabootable USB drive လုပ်နည်းလေးတွေပါ.. Before you get started, you will need to gather together the following:A USB drive of 8GB or more, orA USB external hard drive, orA Firewire external hard drive, orA Thunderbolt external hard drive, orAn SD card of 8GB or moreA Mac running OS X 10.7 Lion or laterConfidence in using Terminal, orA copy of …See MoreMay 21 0
Myo Thant Naing liked Ko Nge's blog post အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများDec 6, 2013Ko Nge shared their discussion on Facebookစကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!Oct 15, 2013Ko Nge postedadiscussionစကာင်္ပူပိုးထနေသူတွေအတွက် နိုင်ငံတကာလက်မှတ် CCNA Study Guide!Credit @ thanhan ပညာရှင်အဆင့် IT Engineer ဆိုတာ Technician and Professional အဆင့်ဆိုပြီးရှိပါတယ်၊ စစချင်းတော့ အလုပ်သင်လူငယ်လေးတွေကို Technician အဆင့်လောက်ဘဲပေးလေ့ရှိပြီး လစာကို ဒေါ်လာ၁၂၀၀ကနေ ၁၈၀၀လောက်ဘဲစပါတယ်၊ နောက် အဆင့် က အဖော်မပါ တယောက်ထဲ ချဲရတဲ့ Professional ကို ဒေါ်လာ၁၆၀၀ကနေ ၂၅၀၀ အများဆုံးပေးလေ့ ရှိပါတယ်၊ ဒီမှာလုပ်သက်ရှိရင်တော့ ပိုရပါလိမ့်မယ် ဒေါ်လာ၃၀၀၀ ပတ်လည်ပေါ့…. ဒေါ်လာ ၄၀၀၀ကျော် သမားတွေလဲရှိပါတယ်… ဒီလိုတွေက…See MoreOct 15, 2013 0
Ko Nge postedadiscussionမိမိရဲ့gmail မေးအကောင့်ကို Hackerလေးတွေ ဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေပါသတဲ့ဗျာ!Credit@Ko Nge မိမိနာမည်နဲနဲထွက်လာတာနှင့် မိမိအီးမေးတွေကိုဖောက်ခိုးဖို့ကြိုးစားလာတော့တာဘဲ..MAC က Vurus မရှိသလောက်ပြောကျလို့လေ..အခုတော့ များလိုက်တဲ့ ဟာတွေ…. မိမိမြန်မာဘလော့တွေကြောင့်လားမသိပါဘူး ခိုးတဲ့နိုင်ငံက အမေရိကန်ကနေလာတာတဲ့ဗျာ... ရွှေhacker လေးတွေဘဲဖြစ်မှာပါ….အခုလဲ အီးမေးတွေထဲမှာ ဗိုင်းရပ် sys.bat2.txt(Bat.delfiles-6) နှင့် xxxx.emlx files 57ခုကို email တွေထဲပို့လွှတ်တာဗျာ…ကျွှန်တော်အီးမေးကိုAuto ဖွင့်ထားမိတာကိုး.. 7120.emlx files…See MoreSep 17, 2013 0
Ko Nge shared their discussion on Facebookနိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)Apr 11, 2013Ko Nge posted discussionsနိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)နိုင်ငံတကာက အလိုအပ်ဆုံးကျွမ်းကျင်လုပ်သားအမျိုးအစား(၂၀)1 more…Apr 11, 2013noyar commented on Ko Nge's blog post အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများ"Oမ်းတာပါလယ်"Mar 2, 2013Ko Nge postedablog postအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများအွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀င်ငွေရှာနည်းလမ်း အပိုင်း(၈)Credit@ Ko Ngeဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀င်ငွေရှာဖို့တောက်လျှောက်ရေးတင်နေရလဲဆိုတော့ ကျောင်း မပြီးခင်ကတည်းက ကျွှန်တော်မြန်မာပြည် အနှစ်၂၀ လုံးနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးဘဲ လုပ်ဖူးတာဆိုတော့ အခုအကြောင်းအမျိုးမျိုးတွေကြောင့်…See MoreMar 2, 2013 1
Ko Nge postedadiscussionမိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!မိမိဘလော့မှာ အုပ်စုဖွဲ့ပြီးဝင်ရေးစေချင်ရင်!We make tools Your make do!Credit@ Ko Ngeဒါလဲဘလော့ဂျာတွေမှာ မသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာပါ! ဒါလဲနာမည်ရလာတဲ့ ဘလော့တွေမှာ စာဖတ်ပရတ်သတ်တွေ စိတ်ဝင်စားပြီး စာဝင်ရေးချင်တာတွေရှိကျမှာပါနော်! ဒီအတွက် ၀င်ပြီးပညာပေးတွေ၊အတွေ့အကြုံတွေကို ပြန်လည် ဖလှယ်ချင်ကျတဲ့ သူတွေအတွက် ဒီ Group အုပ်စုတွေက.....အခု နောက်ပိုင်းမှာတွေ့မြင်နေရတဲ့ Social…See MoreFeb 28, 2013 0
What is your current work position? (e.g. Software Developer, System Engineer, Programmer, Student)
ှ Site Engineer(CCTV,PA,FIDS)
Name of company or school?
NCS Communication Engineer Pte,Ltd
[Optional] What is your educational background? Please, list any technical certifications you may hold (e.g. MSCS, MCP, MCSE, OCA).
Make Money While Your Sleep!
Not knowing is not good enough!Will be so noble and kind for this good deed!Will remain inthe heart of mine!You may hurt yourself!"We care! Giving hope! Improving lives!" Ko Nge's Blog
Posted on June 1, 2014 at 3:13pm0Comments
ကမ္ဘာကျော် Internet Muti -Level Marketing Advertising နည်းလေးတွေပါ... အခုနာမည်ကျော် facebook နှင့် Google တွေမှာလဲ သုံးနေတဲ့ နည်းတွေပါ...အင်တာနက်လိုင်းကောင်းရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင် ပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်...ကျွှန်တော်ဆို amazon က affiliate ကိုတောင်ယူရောင်းတာဗျ...ဒါပေမဲ့ အသိတွေထဲက internet ကနေ ပစ္စည်းဝယ်လို့ရမှန်းမသိသေးတဲ့သူတွေ ပိုများနေလို့နှင့် Credit Card , Debit Card လေးတွေ တောင်မရသိကျမရှိကျသေးတာကိုတွေ့နေရသေးတယ်.... တချို့ဆိုရင် internet… Continue စင်ကာင်္ပူပိုးထနေတဲ့ ရွှေမြန်မာအုပ်စုလေးတွေ အခန်းတွေစုဌားပြီး အလုပ်လာရှာနေကျတယ်!
Posted on May 21, 2014 at 6:29pm0Comments
စင်ကာင်္ပူပိုးထနေတဲ့လောလောဆယ်ဘွဲ့ရရွှေ့လေးတွေ ဒါကိုဖတ်ပြီးမှ စင်ကာပူကိုလာစေချင်ပါတယ်...… Continue အွန်လိုင်းပေါ်မှာ စီးပွားဖြစ်အဆင့်ထိလုပ်စားလို့ရတဲ့ကျော်ငြာနည်းလမ်းလေးများ
Posted on February 19, 2013 at 5:20pm 1 Comment
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ၀င်ငွေရှာနည်းလမ်း အပိုင်း(၈)
Credit@ Ko Nge
Continue အွန်လိုင်းတွေမှာဈေးရောင်းကြည့်ရအောင်! အပိုင်း(၁)
Posted on November 30, 2012 at 9:30am0Comments
At 8:53pm on May 30, 2012, Win Min Tun said… အကို နည်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပါ။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သိပ်မရှင်းတာလေးတွေ အကိုနဲ့ တွေ့ပြီး မေးချင်လို့ပါ။အကို အဆင်ပြေမယ်ဆိုလျှင်ပေါ့။ No comments yet!
Add Ning App Ko Nge's YouLyrics